I-Semalt ixwayisa ngezinhlobo ezahlukene ze-WordPress Iwebhusayithi Hacks
Uma izikrini zakho zokuphepha zibuya zihle, iwebhusayithi yakho kungenzeka ukuthi ihlaselwe abagaxekile. Sonke siyazi ukuthi i-WordPress iyisistimu yokuphatha okuqukethwe kakhulu futhi edumile kakhulu. Ngenxa yocingo elikhulu kanye nevolumu lamawebhusayithi e-WordPress ku-intanethi, akunakwenzeka ukuba sihlale siphephile kusuka kuma-hack WordPress.
U-Ryan Johnson, isazi esiphezulu esivela ku Semalt , unikeza lapha ukubuka ngokubanzi izinhlobo ezahlukene zeWebPress website e-inthanethi ukuze uhlale uphephile.
I-Malware ihlanganisa zonke izinhlobo zezinhlelo eziyingozi nezingozi kanye nesofthiwe, njenge-virus, iTrojans, ransomware, ne-spyware. Uzobona i-akhawunti yakho ye-Google Analytics; I-malware futhi i-pop-ups ezipheqululini zewebhu isisixwayisa ukuthi siyilungise ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kufanele ufake i-antivirus noma uhlelo lokulwa ne-malware ukuze ulususe. I-Malware ingenza zonke izinhlobo zezinto ezinjengezinto zokuba imininingwane yekhadi lesikweletu, ulwazi lomuntu siqu, ukulimaza isayithi lakho, ukususa amafayela abalulekile nokuvala ikhompyutha yakho noma idivayisi yeselula uze ukhokhe isihlengo.
Ukuhlaselwa kobugebengu bokweba ngobugebengu bokwehla kobugebengu ngokuphanga kuningi kwenzeke nge-imeyili ekukhanga ukuba uvule okunamathiselwe okuthile noma ungene kumawebhusayithi ambalwa afana ne-PayPal, ibhange laseMelika, nabanye. Bafuna ukuthi uchofoze izixhumanisi ezisolisayo bese ubukeka uqobo. Ngokuvamile, ukuhlaselwa kobugebengu be-phishing kuhloswe ukukukhohlisa, futhi abaduni basebenzisa lawo ma-imeyli ukweba iziqinisekiso zakho kwi-intanethi. Akufanele neze uchofoze okunamathiselwe kwe-imeyili okubukeka sengathi okusolisayo noma okungajwayelekile.
I-SQL ulimi lwekhompiyutha olusetshenziswa ngama-blogs wakho we-WordPress namawebhusayithi. I-SQL (Ulimi Lokusebenza Oluhlelekile) lisiza ukuxhumana nama-database. Ngamafuphi, ama-SQL injection angathatha indawo ye-SQL imibuzo ngamakhodi aholela ku-database ukwenza into efana nokuqhaqhazela nokuphinga. Abaduni basebenzisa lolu lwazi ukweba idatha yakho futhi badlulise amafayela akho kusuka kwikhompyutha eyodwa kuya kwenye. Ama-Plugin we-Wordpress nezindikimba ezihlukahlukene zingasiza ekuvimbeleni ama-SQL injection.
Nge-akhawunti ehlukahlukene yama-imeyili ku-intanethi, abantu basebenzisa iphasiwedi efanayo kumawebhusayithi ahlukene. Uma abaduni bethola elinye lamaphasiwedi wakho, bangakwazi ukufinyelela ama-akhawunti akho amaningi kalula. Yingakho kufanele uvimbele amaphasiwedi akho ukuthi angakhononi futhi agcine amaphasiwedi ahlukene kuma-akhawunti ahlukene.
Izibuyekezo zesofthiwe ezingekho
Ochwepheshe be-WordPress bayazikhandla ekuthuthukiseni ama-plugin, isofthiwe, nezindikimba. Abasebenzisi be-Wordpress abazikhandla ngokufaka nokubuyekeza izinhlelo zabo. Ngakho, ukulahlekelwa izibuyekezo zesofthiwe kungaholela ekuhluphekeni kwi-intanethi. Kuphephile ukusho ukuthi lokhu kube enye yezinkinga ezinkulu kwi-inthanethi futhi ungase ulahlekelwe amafayela ahlukahlukene ahlukahlukene nedatha ngenxa yezibuyekezo ze-software ezonakele.
izingqikithi ezingaphephile nama-plugin
Njengabantu abahlukene abafaka amakhodi ku-WordPress ngezinhlobo zezingqikithi nama-plugin, abaduni bangasakaza kalula i-malware nama-virus kuwo. Isivikelo esingcono kakhulu ukugcina ama-plugin kanye nama-themes abuyekeziwe.
Izinqubomgomo zokuphepha ezimbi
Izinqubomgomo ezimpofu zokuphepha zingenza uzizwe udabukile, futhi ibhizinisi lakho lingase liyeke ukukhula. Uma abantu abaningi befinyelele iwebhusayithi yakho, akudingeki wenze umqondisi. Esikhundleni salokho, ungabanika indima ehlukene futhi uwavimbele ekufinyeleleni iphaneli yokulawula ye-WordPress site yakho.
Ukuhlaselwa kwe-Distributed Denial of Service kusakazeke futhi kuqaliswa kalula kwi-intanethi. Bangakwazi ukwehlisa kalula izingosi ngaphandle kokukwazi ama-webmasters.